Doorkii dhaqaalaha ee Islaamka oo soo laba-kacleynaya!! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Sahanka August 18, 2015	0 205 Views
Muqdisho (Himilonews) – Kororka fahmeedka nolosha dhabta ah ee Islaamku tilmaamayo iyo macnaha qotada dheer ee laga dheehan karo xeerarka hadba sah kasta oo la joogo dhaqan-galka noqon kara oo uu sido, ayaa dhawaanahan waxaa isasoo taraya baahi loo qabo in nolosha oo dhan lagu wada hago. Gaal iyo Muslimba waxaa muuqata inuu diiradda u saaran yahay. Dhacdooyin lasoo maray oo xalkoodii la waayay iyo arimmo badan oo furfaamiskooda adkaaday kadib, Islaamku wuxuu maanta dunida u noqday billadaye san-ku-neefluhu miciin biday!
Waayadii hore in masjidka lagu tukado, xigtada la xiriiriyo, saboolka oo la gacan-qabto iyo guurka oo lagu saleeyo shareecada Islaamka ayaa ahayd waxa kaliya ee laga qaatay diinta xeesha dheer ee Islaamka. Shareecada ayaa door hoose ku lahayd habka dhaqan-dhaqaale ee bulshada Muslimka ah. Kaabayaasha nolosha oo ah maaxda ay bulshada kasoo wada rakaado waa diiradda saxda ah ee kororka maaliyadeed ee qof walba. Ganacsigu waa doorka ugu weyn ee sal-dhig u noqda isku xirka bulshada iyo horumarka dalka. Meel uu ganacsiga negi ahi ka jiro, dhaqaale ayaa ka dhasha. Hayeeshe, dhaqaaluhu, raasamaal kadib, waxaa jira waxyaabo uu ku dhasho. Dacaayaddu ama xayeysiintu waa mid kamid ah ilaha ugu muhiimsan ee sare u qaada dhaqaalaha ganacsiga.
Dacaayaddu ama xayeysiintu, macno ahaan, waa ii dheh loo sameeyo ganacsi—si dareenka macmiilka loogu duwo—iyada oo si buun-buunin ah walxahaas loo xayeysiiyo. Inkasta oo xayaysiintu aanay lahayn xeer dhab ahaan la isku raacsan yahay, hadana waa lagu kala tagsan yahay ka badbadinteeda. Waxa mar kasta la xayeysiiyo dhab ahaan uma dhigna sida loo dhaho. Si kastaba, wax walba oo la xayeysiiyo ma ahan inay yihiin wax hooseeya ama wax sarreeya. Waayo ogaalka ah inaad macmiishaada cod-baahiyaha uga sheegto inaad adeeg ama agab cusub u keentay ayaa ah waxa kuugu muhiimsan. Walow war-baahinta Soomaalida ay si indha la’ bulshada uga iibiyaan wax aan iibba ku habboonayn.
Marka aan dib ugu soo laabto bartilmaantayda, gudo iyo dibadba, waxaa ii muuqda in horumar laga sameynayo heerka xayeysiin ee ka turjumi kara caqiidadeenna. Hubaal ogaanshaha quruxda dhabta ah iyo kororka baraarug ee bulshada Islaamku sara-kacayso, waxay lama huraan u noqotay in billadaye looga dhigo waxay aaminsan yihiin.
Tusaale ahaan waxyaabaha lagu meyrto sida saabuunta iyo dharka qaar sida Hijabka iyo qamaarka, waxaa xayeysiis u sameeyey gabdho muxajabaad ah taas oo soo jiidatay indhaha dad badan oo Islaamka jecel. Waaagii hore in gabar mutuxan lagu xayeysiiyo agabyo badan, waxay ahayd ilbaxnimo lagu faano. Balse taasi raadkeedii wuxuu u muuqdaa gabbal-dhacay. Haween badan oo Muslim iyo Gaalo isugu jira ayaa sameeya xayeysiimaha dharka, xijaabyada, udugga iyo marisyada. Kuwa xayaysiisyadan sameynaya waxaa ku jira jilayaal dhedigyo Hindi ah kuwaas oo tusaale nool u noqon kara dadywga 7-bilyan ee dunida ku nool inay qiimeeyaan macnaha quruxda dhabta ah, gaar ahaan dadka ay kasoo jeedaan ee Hindiya oo badigood Hinduu ah.
Si kastaba, laba arin ayaan kala baxay dacaayadahan cusub: marka hore waa inay soo noolaanayso doorkii shareecadu ku lahayd dhaqaalaha dunida oo ganacsato badani hadda diiradda saarayaan inay xayaysiiskooda ku jaan-gooyaan shareecada Islaamka—iyo tan labaad oo ah—dacwad dhaqan-gal ah oo akhlaaq ku salaysan inay u noqonayso bulshada aan Muslimka ahayn. Taas oo ugu danbeyn sabab u noqon doonta raad-raacista ay ugu jiraan fahamka nolosha runta ah iyo quruxda dhabta ah inay ku soo Islaami doonaan.
Halka ay amaan iyo bogaadin mudan yihiin ganacsatada Muslimiinta ah, siiba kuweenna Soomaaliyeed, ee bulshada Islaamka quruxdooda inay muujiyaan guntiga u xirtay.
Ustaad Xasan-kafi Cali Cusmaan.
Xasan-kaafi Cali Cusmaan waa aqoonyahan da’yar oo bartay culuumta bulshada. Wuxuu bare ka yahay xarumo wax-barasho oo dhowr ah. Waa cilmi-baare Sooyaalka iyo deegaanka ku gaaroobay. Kala xiriir + 252615756368.
Previous: Dhacdo: Geeri nimaan tahriib tegin iyo daltebey ku roon tahay!!
Next: Dhibaatada lagu hayo Muslimiinta Rohingya.
Muslimiin araga la’ oo sameeyey tarjumada Qur’anka oo ku qoran farta Indhoolayaasha.
Dhaleeceyn loo jeediyay haweeney caan ah oo sheegtay inay guursanayso….